Location: musha » Kutumira » Hotera & Resorts » Sandals Resorts Inoita Vashandi Vavo Magamba
mufananidzo nerubatsiro rweSandals Foundation
Makore ose, Sandals Resorts inopa vashandi vayo mukana wekukurudzira zvirongwa zvekusimudzira nharaunda izvo zvichatsigirwa ne Sandals Foundation (iyo philanthropic ruoko rweSandals Resorts International).
Kuna Jeremy Chetram, mudzidzi anodada wekare weSt. John's Christian Secondary School (SJCSS), uyu wanga uri mukana wekutora mukana wekushongedza mater mater wake nerabhoritari ichangobva kutsaurirwa yeaudio-visual, kusimbisa nzvimbo yekudzidzira yevadzidzisi uye. vadzidzi zvakafanana.
Chetram akafemerwa kuti agadzirise kirasi murabhoritari inonzwika-yekuona yaaifunga. Nzvimbo ichangobva kuvandudzwa paSJCSS yaisanganisira kupihwa kwemadhesiki matsva nemacheya, mhepo isingadyi simba remhepo, pendi, basa remagetsi, uye zvigadziriso zvekuzora mukamuri, inosvika kukosha kweEC$20,000.
Mukugoverana nevadzidzi pamutambo wokugovera, Chetram akataura pamusoro porudado rwechikoro: “Pose pandinova nomukana wokutaura nezvechikoro changu, ndinonzwa ndichidada. Unoziva, vamwe vanhu vangakushora vachiti, ‘unobva kuchikoro chokumaruwa,’ asi usarega izvozvo zvichikunetsa. Chikoro ichi chakaburitsa akawanda ematarenda epamusoro avo pasi rese vakabata zvinzvimbo zvakasiyana. Ndinoda kuti unzwe kudada nesangano rauri chikamu charo, ndosaka mukana pawakauya wekuita chimwe chinhu pachikoro changu ndakautora, ndikataura nechikoro, ndikawana kuti chii chaidiwa.”
Kurudziro nechiito chinoperekedza ichi chakaita senyaya yenguva yamwari, sekutaurwa kwazvakaitwa nemukuru wechikoro, Nerine Augustine, uyo akati: “Kare muna 2019, muchirongwa chedu chemakore mashanu ebudiriro yechikoro, chimwe chezviitiko zvataida kuita kwaive kugadzirwa kwerabhoritari yekuteerera-inotaridzika pachikoro chedu. Izvi zvakagadzirirwa kupa mikana yakanakisa yedzidzo yevadzidzi vedu, iyo inosanganisira kuisirwa tekinoroji mukudzidzisa nekudzidza. Saka muna 5 Chetram payakasvika, takaziva kuti chinangwa ichi chinogona kunge chakaitwa.
“Zvino, tiri pano pazuva rino rokufara kukuru nerumbidzo kuna Mwari wamasimba ose nokuda kwokupa nyasha Dzake pachikoro chedu. Ndakamiririra vashandi pamwe nevadzidzi vepaSt. John's Christian Secondary School, zvinondifadza zvikuru kupa kutenda kuSandals Foundation, nerubatsiro rwakapiwa mukunatsiridza imwe yekirasi yedu kuti ive rabhoritari inonzwika.
“Nekuda kwedenda reCCIDID-19, chirongwa ichi chakamiswa kwenguva. Kunyangwe zvimhingamipinyi, isu tasvika nhasi mukamuri yedu ichangobva kugadziridzwa yekuteerera-inotaridzika.
"Ticharamba tichikoshesa rubatsiro rwatakapihwa neSandals Foundation."
“Kushivirira pamwe nekuzvipira kwakaratidzwa mukuitwa kwechirongwa ichi kunofanirwa kurumbidzwa zvikuru. Maropafadzo aMwari ngaave pasangano renyu. Ndatenda! Ndatenda! Ndatenda!"
Mumashoko ake ekupedzisira, Chetram akaenderera mberi achikurudzira vadzidzi, achiti: “Kusvikira nhasi, hunhu hwandakabva pachikoro ichi, kubva mukunamata kwemangwanani, kurudziro neruremekedzo rwataidzidziswa – ndakaenderera mberi nebasa rangu. hupenyu. Kunyange zvazvo mamiriro ako ezvinhu angasakubvumidza kuita chimwe chinhu, nguva dzose iva neshingairo iyoyo yokuita zvakawanda.
“Pandakapedza chikoro ndakatanga kushanda, uye vabereki vangu vakanga vasina mari yekuti ndienderere mberi nedzidzo. Zvakadaro ndakaramba ndichishanda ndikaramba ndichitsvaga mikana yedzidzo zvishoma nezvishoma, uye ndinodada kuti muna 2020 ndakapedza Master's muBusiness Administration paSt. George's University, uye kwemakore matatu apfuura ndanga ndiri Guest Experience Manager pa Sandals Grenada Resort. Pasinei nekuzorora kwandakaita, ndakashingirira.
“Lab iyi ndeyako, ishandise zvizere. Dada nazvo uye ramba wakapfeka uniform yako nekudada. Mufaro wangu wakakwana kuita chinhu chakadai kusangano rangu rakadzikira, uye ndicharamba ndichipa rutsigiro rwangu. "
Kuenda kuEurope kuri Kuvhurazve